I-OPS 75% i-Alohol Hand Sanitizer Wipes Wholesale - I-COVID-19 Defend
Ikhaya / Imikhiqizo / Ukusula kweSanitizer
I-Alcohol Hand Sanitizer Wipes
I-OPS Hand sanitizer isula ngotshwala noma ngaphandle kotshwala (i-benzalkonium chloride), izingcezu eziyikhulu zihlanza ama-wipe ephakeji elilodwa. Ungalokothi ukhathazeke ngezandla ezingcolile futhi. Kukulungele ukuhlala okusha usohambweni, nefomula esezingeni eliphakeme uhlanze kahle izandla zakho. Sula yonke indawo ongathanda ukuyihlanza.
♣ Iqukethe i-Moisturizing Aloe neVitamin E.
Cleans Ukuhlanza okusheshayo kanye nokuhlanza isandla.
Safe ukusebenzisa ngaphambi kokudla nokuphuza.
Ing Ukomisa okusheshayo, kungashiyi nsalela enamathele.
Buyela Kumsebenzi Wokuqala Wesikole.
OPS Hand Sanitizer Ukusula Ngezandla
Ama-antibacterial disinfecting wipes angena iphakethe ephelele yamayunithi ayi-100. Lo mkhiqizo ulungile,
ngoba ziyisilima esisebenzayo ngempela yokuhlanza izandla zakho nokugcina izinto zehhovisi noma zomsebenzi zisezingeni elifanele.
Amagugu ayingozi angama-99% abulewe futhi kususwe okuthile. Ngokuqinisekile inketho esebenzayo uma ufuna
ikhwalithi yekhwalithi isula ngentengo enhle. Ama-OPS ahlinzeka ngo-70-75% i-Alcohol sanitizing wipes ngesandla futhi i-benzalkonium chloride wipes
Ingabe ama-Hand Sanitizer Wipes ayasebenza ku-Covid-19?
Ngabe ufuna ukuthola i-antibacterial hand esula kakhulu etholakala njengamanje emakethe?
Cishe uye wabona ukuthi kunemikhiqizo eminingi kakhulu kangangokuba kunzima ukumane ukhethe ezinye ezisuliwe.
Nawa amanye amaphuzu okufanele uwagcine engqondweni lapho ukhetha ama-virus asusa amagciwane.
Ukuthi ubazifunela lapho uhamba noma uhamba ngezinyawo noma ungekho ekhaya futhi awukwazi hlanza izandla zakho
ngensipho namanzi noma ngemisebenzi ehlukene edinga izimo ezihlanzekile zokuhlanzeka zombili ezintweni ezibonakalayo
(amathuluzi ezokwelapha, amakhishi okudlela njll.) Njengabasebenzi, ukusula kwamagciwane ngaphandle kokungabaza kuyindlela engcono kakhulu.
Lezi ukusula kusebenza ikakhulukazi susa zonke izinhlobo zamagciwane ezandleni noma kulolu hlobo lwezinto.
Lapho ukhetha i-wipes yokuhlanza izandla enhle kakhulu, into yokuqala okufanele uyicabangele ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi i-Dele isuse amagciwane
futhi izandla noma into eyomile. Sihlala sincoma ukukhetha ama-wipes asebenza ngokushesha futhi azophuma ngokushesha okukhulu.
Kungathakazelisa futhi ukuthi wazi ukuthi ungakanani isibulala-magciwane i-Dele futhi unamakhono wokuthi umkhiqizo ofakiwe noma wekhompiyutha unawo.
Kepha ngaphandle kokungabaza, into ebaluleke kakhulu ukubheka amakhemikhali aqukethe ukusula, ikakhulukazi uma esezokwazi
isetshenziswa ezandleni. Kuhle ukungasebenzisi izilenge ezinamakhompiyutha amaningi futhi uhlale ukhetha ezezemvelo kakhulu,
yize lokhu kusho ukulahla iziswidi ezinephunga elikhulu ngoba zifaka amakha.
Ukuthungwa kwesiphu nakho kungabhekwa, ngoba kuzoba nokuthakazelisa ukuthi iyamelana futhi ayishiyi imicu
noma izinsalela. Ngokungangabazeki indlela elula yokuzihlanza nokuhlanza ezinye zezinto zethu zomuntu siqu noma zensimbi
lapho insipho namanzi noma eminye imikhiqizo yokubulala amagciwane ingatholakali, kodwa akufanele isetshenziswe njalo njengokujwayelekile
indlela yokuhlanza, ngoba bangagcina ukulimaza izikhumba ezibucayi kakhulu uma ukhetha ukusula okunamakhemikhali amaningi.
Futhi, ukumelana kungadalwa futhi lezi zingoma ngeke zisasebenza ekulweni namagciwane athile.
Ngakho-ke sincoma ukusetshenziswa kwayo okulinganiselayo futhi. Uma kungakhoneka, ukukhethwa kwezimpiko zemvelo kunakho konke.
Isithako esisebenzayo: I-Ethyl Alcohol, Amanzi Ahlanganisiwe, nabanye.
Kuyingozi uma igwinya.
Ungasebenzisi njengezingane ezisula izingane.
Ungashisi phansi iToliet.
Kukhanya Kakhulu. Gcina kude nomlilo noma ilangabi.
Ungadli noma uphuze lapho uphatha.
Ingozi Kwabantu Nezilwane Zasekhaya.
Phakamisa ithebhu ngaphezulu kwesihloko ukuze uvule.
Vula iphakethe lomswakama wokuvula umswakama ngaphambi kokuwusebenzisa
Khipha kuqala usula ngokusebenzisa isikhungo sokuhambisa se-canert.
Vala isembozo ukuze ugcine umswakama
I-WIpe ihlanzekile ngalo mkhiqizo. Umoya mawume.
Lapho uku-oda izandla zesanitizer? Imininingwane engaphezulu, ngicela Xhumana nathi!
I-Hand Sanitizer Wipes Sheet
Ukusula Kwesandla se-antibacterial
Umkhiqizo we-Spec. Amapayipi angama-100 Wipes Ngaphakathi
Isithako I-ethyl Alcohol noma i-benzalkonium chloride, Amanzi A-Deionised.
Storage Gcina endaweni enomoya omncane futhi opholile
MOQ Amabhodlela we-5,000
Usuku lokuthumela Cishe Isonto Elinye.
Sicela uqinisekise ukuthi ungumuntu ngomuntu Iloli.